के तपाइलाई थाहा छ ? यस्तो बेला महिलालाई शा’रि,रीक चा’हना बढी हुन्छ ! जानी राखौ।। - Mitho Khabar
June 21, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on के तपाइलाई थाहा छ ? यस्तो बेला महिलालाई शा’रि,रीक चा’हना बढी हुन्छ ! जानी राखौ।।
यौ/न विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावा’री पूरा भएको पाँच देखि सात दिनसम्म यौ/नको ‘मु ड’ बढी हुन्छ । लिं’गको आकार कत्रो भए महिलालाई शा’री’रिक यौ/न स’म्पर्क गर्दा आ’नन्द मिल्छ ? ( जानी राखौँ )————- लिं’गको आकार कत्रो हुनुपर्छ ? यौ/न सन्तुष्टिका लागि लिं/ग/को सही आकार कति हो ?
यस प्रकारको सोच प्रायः सबै पुरुषको दिमागमा आइरहन्छ, तर अब यसको उत्तर पनि प्राप्त भएको छ । वैज्ञानिकहरूले यौ’न सन्तुष्टिका लागि लिं/ग/को आकार कत्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया तथा युनिभर्सिटी अफ मेक्सिकोका वैज्ञानिकहरूको एक टिमले हालै एउटा सर्वेक्षण गरेका थिए, जसमा १८ देखि ६५ वर्षका ७५ जना महिला सहभागी थिए ।
ऊक्त सर्वेक्षणका त्रममा महिलाहरूलाई लिं/ग/का फरक–फरक साइजका कृतिम लिं/ग /देखाइएको थियो । यो अनुसन्धानबाट आएको परीणाम देखेर वैज्ञानिकहरू पनि अचम्भित भएका छन् । परिणाम अनुसार यौ/न सन्तुष्टिका लागि धेरै महिलाले ६ दशमलव ३ इन्चको आकारलाई सही बताए । यसैलाई आधार मानेर वैज्ञानिकहरूले ६ दशमलव ३ इन्चको लिं/गलाइ उपयुक्त मानेका छन् ।
कसैको लिं/गको आकार ६ दशमलव ३ वा ६ दशमलव ४ नभए पनि आत्तिनु भने पर्दैन । किनभने लिं/गको औसत आकार ५ दशमलव २ इन्च हुन्छ । उक्त अध्ययनले के पनि देखाएको छ भने महिलाहरू यौ/न/का लागि लिंगको आकारलाई मात्र महत्व दिँदैनन् । यद्यपि क्याजुअल सेक्सको समयमा भने उनीहरू लिं/ग/को आकारमा पनि पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउँछन् । के तपाई पहिलो पटक यौ’न सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ ? पहिलो पटक यौ/न /सम्पर्क गर्दा ध्यान दिनुपर्ने ९ महत्वपूर्ण कुराहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् । अध्ययन गर्नुहोला….
यौ/न/जिज्ञासा सँगै मानिसहरु यसको बारेमा थाहा पाउन पनि आतुर हुने गर्दछन् र मानिसहरुले धेरै प्रकारको गलत जानकारी पनि दिने गर्दछन् । यस्तै कौतुहलतालाई समाप्त गर्नका लागि पहिलो पटकको से’क्सको बारेमा हामी केहि जान्कारी दिन्छौँ । पहिलो पटकको यौ/न सम्पर्कका बारेमा मानिसहरुमा धेरै प्रकारको कौतुहल र जिज्ञासा उत्पन्न हुने गर्दछ ।
१– यदि पहिलोपटक से/क्स/ गर्दै हुनुहुन्छ भने चरमोत्कर्षको आशा नराख्नुहोस् । यतिबेला एक अर्काको शारिरिक आवश्यकताको बारेमा जानकारी दिनुहोस् र लिनुहोस । २– यदि तपाईं आफ्नो पहिलो से/क्स धेरै राम्रो हुने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईं गलत सोच्दै हुनुहुन्छ । याद राख्नुहोस् यो तपाईंको लागि नयाँ अनुभव हो र यसका लागि तपाईं धैर्यवान् हुन जरुरी छ । तपाईंको पहिलो से/क्स अनुभव राम्रो नभएपनि यसमा डराउनु र आत्तिनुपर्ने छैैन किन भने यो समय सँगै राम्रो हुँदै जान्छ ।
३– महिलाहरुले पहिलो पटक से/क्स गर्दा आफ्नो पार्टनरलाई खुसी राख्नका लागि झुटो चरमोत्कर्षको कुरा गर्नुपर्दैन । यो तपाईंको पहिलो पटकको से/क्स भएका कारण तपाईंको पार्टरले तपाईंलाई बुझ्नुहुनेछ । ४– महिलाहरु माया दर्साउन लजाउने गर्दछन् । तर पहिलो पटक से’क्स गर्दा तपाईं पहल गर्नुहोस र उनलाई पर्खेर नबस्नुहोस् । यदि एक अर्काको मुख ताकेर बस्नुभयो भने पुरा रात नै बित्छ ।
५– धेरैजसो मानिसहरु पहिलो पटकको से/क्स गर्नुपूर्व फोहोरी गफ गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छन् तर यो सत्य होइन् । पहिलो पटकको लभ मेकिङको दौरान बिस्तारामा आफ्नो पार्टनरसँग तपाईं के चाहनुहुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दा पनि हुन्छ । ६– विश्वास गर्नुहोस् से’क्समा आकारको कुनै पनि भूमिका हुँदैन । महिलाहरुमा धेरैजसो यो भ्रम हुन्छ कि उनको पुरुषको आकार जति ठूलो हुन्छ त्यति नै उनीहरुहरु आनन्दित हुने सोच्दछन् तर यो सोचाई गलत हो । चरमोत्कर्षमा आकारको कुनै पनि महत्व हुँदैन ।
७– पहिलो पटकको से/क्स निकै पीडादायक हुने धेरै मानिसहरुको भनाई हुन्छ तर यदि ठिक तरिकाले फोरप्ले गरियो र तपाईं यसको लागि तयार हुनुहुन्छ भने पहिलो पटकको से/क्स निकै सजिलो र कम पीडादायी हुन्छ । ८–यदि तपाईं पो/र्न स्टारजस्तो से/क्स गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईंको सोचाई गलत साबित हुनेछ । पो’र्न फिल्ममा देखाइने धेरैजसो झुटो हुने भएकाले यसको पछि नलाग्नुहोस् । ९– पहिलो पटकको से/क्स धेरै लामोसम्म हुने कुरा गलत हो । त्यसकारण पहिलो पटकको से/क्स/मा कुनै उद्देश्य नराखी मात्र आनन्द लिने तरिकाले गर्नुहोला ।